चीनकाे यद्धक विमानकाे सफल परिक्षणले ट्रम्प र मोदीकाे टाउकाे दुखाइ! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > चीनकाे यद्धक विमानकाे सफल परिक्षणले ट्रम्प र मोदीकाे टाउकाे दुखाइ!
admin July 30, 2020 July 30, 2020 अन्तराष्ट्रिय	0
चीनको जमिन र पानी दुबैमा चल्ने विमानद्वारा समुद्रमा पहिलो उडान पूरा गरेको छ । आइतवार पूर्वी चीनको सान्डोङ्ग प्रान्तको तटीय सहर क्वीन्डाओमा यसको सफल परिक्षण भएको हो ।
स्थानीय समय अनुसार १०ः१८ बजे समुद्रबाट उडेका विमान ३१ मिनेट आकाशमा रहेको चीनको प्रान्तीय उड्डयन उद्योग निगम( AVIC)ले जनाएको छ । सन् २०१७ को जमिनबाट उडान र सन् २०१८ को पानीबाट भएको पश्चातको उडान आइतवारको समुद्रमा भएको सफल उडान ठूलो सफलता भएको एभीआइसी( AVIC)ले जनाएको छ ।
यो विमान एजी६०० विश्वको सबैभन्दा ठूलो उभयचर (पानी र जमिन दुबैमा) विमान हो । आपतकालिन उद्धार र प्रकृतिक विपद् रोकथाम र नियन्त्रणका गर्न चीनले विकास गरेको यो पहिलो विशेष विमान हो ।
यो विमान जंगलमा लागेको आगो निभाउन समुद्रमा हुने दुर्घटनामा उद्दार र राहतको कार्य गर्न र सामुद्री वातावरणको अनुगमन गर्न सक्षम रहेको छ । ३७ मिटर लामो यो विमानको बोइङ ७३७ जति नै ठूलो छ । विमानले ४ हजार ५ सय किलोमिटरसम्म यात्रा तय गर्न सक्दछ ।
यो नयाँ विमानकाे सफल परिक्षण पश्चात अमेरिकी विस्तारबादका नायक राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतिय विस्ताबादकि पुजारी मोदीकाे भने पक्कै टाउकाे दुखाइ हुनेछ ।
…त्यसपछि उनले ‘मृ’त्यु रोजिन र संसारबाट सधैका लागि बिदा भइन!
प्रहरी अधिकृतले हस्तमैथुन गरेकाे भिडियो बनाएर सार्वजनिक भएपछि अधिकारी गायव (भिडियो हेर्नुस्)